Waa waqtigii aan la wadaagi lahayn horumarkayaga!
Waxaan si adag u shaqeyneynaa, markaa waan sii deyn karnaa sida ugu dhakhsaha badan. Iyo waxa aad ku bilaabi karto rajada?
Muuqaal aad ufiican
Qalabka PBR iyo dhulka PBR
Naqshadaynta habdhaqanka habeenkii oo lagu taageerayo nidaamka hillaaca caadada ee loogu talagalay saamaynta HDRI
JAM Jwaysways (haddii A380 uu maqan yahay, jidadkeena diyaaraduhu waxay diyaar u yihiin inay u adeegaan shimbirtaas)
Nashaaddo ay wadaan xaalado cimilo gaar ah
Isdhexgalka gawaarida SAM
Eastereggs ... iyo inbadan!
Fadlan la soco shaashadan shaashadda wali way shaqeynayaan, dhismayaashu diyaar ayey u yihiin hase yeeshe weli waxaan diyaarinaynaa waxyaabaha ay ka mid yihiin gawaarida, qalabka dhulka, iyo walxaha kale ee yaryar.
Vaclav Havel Airport Prague, oo horay loo oran jiray Prague Ruzye International Airport, waa garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Prague, caasimada Czech Republic. Gegada diyaaradaha waxaa la aasaasay 1937, markii la beddelay garoonka Kbely. Waxaa dib loo dhisay lana kordhiyay sanadihii 1956, 1968, 1997, iyo 2006.